ओखलढुङ्गमा पहिरोले घर पुर्दा एकैघरका आमाछोरीको ज्यान गयो
नेपाली समय Loading...२०७६ माघ ६ सोमबार
प्रकासित मिति : २०७६, २८ असार शनिबार २२:५० प्रकासित समय : २२:५०
ओखलढुङ्गान्युज, असार २८ ओखलढुङ्गा । पहिरोले घर पुरिदा ओखलढुङ्गामा एकैघरका आमाछोरीको मृत्य भएको छ । मृत्यु हुनेमा मोलुङ गाउँपालिका ७ पात्लेका ४० वर्षिया खपुटी शेर्पा र उनकी १२ र्वािया छोरी याङ्जी शेर्पा रहेका छन् ।
शनिवार बिहान करीब ११ बजेतिर घर भन्दा माथितिरवाट आएको पहिरोको कारण शेर्पाको घर पुरिएको थियो । पहिरोले घर पुरिएपछि स्थानीयको पहलमा उद्धार गरिएको थियो । उद्धार गर्नेक्रममा दिउसो करीब २ बजेतिर शेर्पा आमाछोरीको शब फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओखलढुङ्गाले जनाएको छ ।
योसगै विगत तिनदिन देखी परेको अविरल वर्षातका कारण ओखलढुङ्गामा ज्यान गुमाउनेको संख्या चार पुगको छ । यसअघी खोलाले बगाउदा चिशंखुगढी गाउपालिका वडा नं. ४ की अन्दाजी ८५ वर्षिया पासाङपुटी शेर्पा र सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. ६ माझखर्क बस्ने अन्दाजी ४० वर्षिया कान्छीमाया श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो ।
देशभर परेको अविरल बर्षातका कारण शनिवार दिईएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ज्यान गुमाउनेका संख्या १६ पुगेको छ । हजारौ परिवार विस्थापित भएका छन् । वर्षातको कारण क्षति हुने र क्षति भएको जानकारी आउनेक्रम जारी छ । वाढि पहिरोमा परि अहिले पनि ५ जना बेपत्ता भैरहेका छन् ।
पछिल्ला केही दिनसम्म देशभर पानी परि तराईमा डुवान, कटानको क्रम जारी रहने भएकोले विपद्वाट हुने सम्भावित दुर्घटनाको जोखिमलाई कमगर्नतर्फ लाग्न र सजग रहन नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ ।
शिक्षा ऐनका बारेमा छलफल चलाउदै मोलुङ गाउँपालिका
ओखलढुङ्गान्युज, माघ ६ मोलुङ । मोलुङ गाउँपालिकाले ड्राफ्टको रुपमा रहेको शिक्षा ऐनको बारेमा सरोकारवालाहरुसँग
ओखलढुङ्गामा ६० जनालाई सामुदायीक विपद प्रतिकार्य तालिम
ओखलढुङ्गान्युज, माघ ५ ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गामा चारदिने सामुदायीक विपद प्रतिकार्य तालिमको आज (आईतवार) सम्पन्न
Categories Select Category Flash (4) अन्तराष्ट्रिय (44) अर्थ बाणिज्य (50) कला साहित्य (31) कहाँ के (627) खेलकुद (83) पर्यटन (23) मुख्य समाचार (743) राष्ट्रिय (415) विचार (19) विशेष (273) विश्व (30) शिक्षा (44) श्रीर्ष समाचार (599) समाचार (1,054) संवाद (5) स्थानिय (369) स्वास्थ्य (25)